60-ton Truck Scales at Thilawa Special Economic Zone
These two 60-ton truck scales are foraRotary Singapore project in the Thilawa Special Economic Zone. They comply with the legal-for-trade standards and are also the 8th and 9th POWERCELL PDX truck scales that SUPREME’s MT service team installed and calibrated in Myanmar. The digital load cells comply with the technical requirements for “Weighing and Measuring Devices” according to the guidelines of NIST Handbook 44 and International Organization of Legal Metrology (OIML) R-76 standard.
It is guaranteed that the error for these truck scales will be within ± 10 kg from the true value for measuring the full capacity (60-ton) of the scales and it will be less proportionate if the measuring weight value is lower than full capacity. Rotary Singapore’s Weighbridges at Thilawa Special Economic Zone were successfully installed and calibrated on the 20th of August, 2020.
ဤ တန်၆၀ ကတ္တားနှစ်စီးမှာ သီလဝါအထူးစက်မှုဇုံတွင် Rotary Singapore ၏စီမံကိန်းတခုအတွက် (Legal-for-trade) စံချိန် စံနှုန်းများနှင့် ကိုက်ညီပြီး တိကျမှန်ကန်မှုရှိသော အရည်အသွေးကောင်း မွန်သည့် ကတ္တားများ ဖြစ်သလို မြန်မာနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းနှင့် အညီ စူပရင်း မက်တလာတိုလီဒိုး ဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ကတပ်ဆင် ချိန်ညှိပေးသည့် ၈ စီးနှင့် ၉ စီးမြောက်သော မက်တလာတိုလီးဒိုး၏ နာမည်ကျော် POWERCELL PDX digital load cells များကို အသုံးပြုထားသည့် ကားကတ္တားများလည်း ဖြစ်ပါသည်။
တန် ၆၀ အပြည့်ရှိသောကုန်ကို ချိန်တွယ်ပါက ၎င်းကတ္တား၏ မှား ယွင်း သွေဖီနိုင်မှုမှာ ၁၀ ကီလို အလျော့ အတင်း ထက် မပိုကြောင်း အာမခံနိုင်ပါသည်။ ပို၍ နဲသောအလေးချိန်ကို ချိန်တွယ်ပါက မှား ယွင်းမှုမှာအချိုးကျ လျော့ နည်းသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤ သီလဝါ အထူးစက်မှုစုံရှိ Rotary Singapore ၏ ကားကတ္တားများတပ်ဆင်မှု နှင့် ချိန်ညှိမှုတို့သည် သြဂုတ်လ ၂၀ရက် ၂၀၂၀ခုနှစ် နေ့တွင် ပြီး မြောက်အောင်မြင်ခဲ့ပါသည်။